Okwu ahụ Dị na Jọn 1:1 Ọ̀ Bụ “Chineke” Ka Ọ̀ Bụ “chi”?
Ụlọ Nche | 2008-11-01
NDỊ nsụgharị Baịbụl aghaghị ichebara ajụjụ a echiche mgbe ha na-asụgharị Jọn isi nke mbụ amaokwu nke mbụ. Lee otú e si sụgharịa amaokwu a ná Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ: “Okwu ahụ nọ ná mmalite, Okwu ahụ na Chineke nọkwa, Okwu ahụ bụkwa chi.” (Jọn 1:1) Otú e si sụgharịa akụkụ ikpeazụ nke amaokwu a na Baịbụl ụfọdụ na-egosi na Okwu ahụ “dị ka Chineke,” ma ọ bụ ihe yiri ya. (Nsụgharị bụ́ A New Translation of the Bible, nke James Moffatt sụgharịrị nakwa nsụgharị bụ́ The New English Bible) Ma, lee otú e si sụgharịa akụkụ ikpeazụ nke Jọn 1:1 n’otu Baịbụl: “Okwu ahụ bụrụkwa Chineke.”—Bible Nsọ nke Igbo Union Version.
Ụtọ asụsụ Grik na amaokwu ndị ọzọ dị na Jọn isi nke mbụ na-egosi nke ọma na otú Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ si sụgharịa ya magburu onwe ya nakwa na “Okwu ahụ” agaghị abụ “Chineke” ahụ e bu ụzọ kwuo okwu ya n’amaokwu ahụ. Ka o sina dị, ndị mmadụ na-aghọta amaokwu a n’ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na n’oge ochie asụsụ Grik enweghị okwu ndị na-egosi na o nweghị otu onye ma ọ bụ otu ihe a kapịrị ọnụ a na-ekwu mgbe a na-ekwu maka mmadụ ma ọ bụ ihe. Ọ bụ nke a mere o ji dị mkpa ka anyị tụlee otu Baịbụl a sụgharịrị n’asụsụ a na-asụ n’oge na-adịghị anya e dechara Oziọma Jọn.
Asụsụ ahụ bụ Sahidic nke ndị Copt na-asụ. A malitere ịsụ asụsụ ndị Copt n’Ijipt n’ime narị afọ ole na ole Jizọs gachara ozi n’ụwa. Sahidic bụ olumba mbụ a malitere ide ede n’asụsụ ndị Copt. Akwụkwọ bụ́ The Anchor Bible Dictionary kwuru banyere Baịbụl ndị mbụ a sụgharịrị n’asụsụ ndị Copt, sị: “Ebe ọ bụ na a malitere ịsụgharị [Septuagint] na [Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst] n’asụsụ ndị Copt n’ihe dị ka narị afọ abụọ a mụchara Kraịst, nke a pụtara na e si [n’ihe odide asụsụ Grik] sụgharịa ha, bụ́ ndị ka ọtụtụ ihe odide ndị a ka nwere ugbu a mee ochie.”
Ọ dị ihe abụọ mere Baịbụl a sụgharịrị n’asụsụ Sahidic nke ndị Copt na-asụ ji pụọ nnọọ iche. Nke mbụ bụ na dị ka e kwuru na mbụ, ọ na-egosi otú Ndị Kraịst dịrị ndụ n’ihe dị ka narị afọ atọ a mụchara Kraịst, bụ́ mgbe ndị ụka malitere ịkụzi ozizi Atọ n’Ime Otu, si ghọta ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ. Nke abụọ bụ na o nwere otu ebe dị mkpa ụtọ asụsụ ndị Copt yiri ụtọ asụsụ Bekee. Asụsụ Siria, Latịn, na nke ndị Copt bụ asụsụ ndị mbụ e nwere Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst na ha. Asụsụ Siria na Latịn enweghị okwu ndị na-egosi na o nweghị otu onye ma ọ bụ otu ihe a kapịrị ọnụ a na-ekwu mgbe a na-ekwu maka mmadụ ma ọ bụ ihe, dị ka asụsụ Grik na-enweghị. Ma, asụsụ ndị Copt nwere ya. Ọkà mmụta bụ́ Thomas O. Lambdin, kwuru n’akwụkwọ ya bụ́ Introduction to Sahidic Coptic, sị: “Mkpụrụ okwu ndị Copt, nke na-akapị otu onye ma ọ bụ otu ihe a na-ekwu okwu ya ọnụ na nke na-anaghị akapị ya ọnụ yiri nnọọ nke asụsụ Bekee.”
N’ihi ya, nsụgharị Baịbụl ndị Copt na-eme ka e nwee ihe àmà na-egosi otú e si aghọta Jọn 1:1 n’oge ahụ. Gịnị bụ ihe àmà ahụ? Na Baịbụl ahụ, n’akụkụ okwu ahụ bụ́ “chi” nke dị ná ngwụcha ngwụcha Jọn 1:1, e dere okwu na-egosi na e nweghị otu chi a kapịrị ọnụ a na-ekwu okwu ya. Ya mere, a sụgharịa ya n’asụsụ Igbo a na-asụ n’oge a, ọ ga-agụ, sị: “Okwu ahụ bụkwa chi.” O doro anya na ndị sụgharịrị Baịbụl n’oge ochie ghọtara na ihe Jọn dere na Jọn 1:1 apụtaghị na Jizọs bụ Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile. Okwu ahụ bụ chi, ọ bụghị Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile.